Avereno mivantana ny demokrasia amin'ny fomba fohy avy amin'ny fanakatonana sy fanarenana ny toe-karena: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 15 May 2020	• 24 Comments
Ny demokrasia mivantana dia vahaolana avy amin'ilay horohoro ankehitriny izay nahatonga ny governemanta Holandey handroba ny firenentsika. Endrika demokrasia izay ifidianan'ny vahoaka mivantana ny solontenany amin'ny fifidianana (an-tserasera) azo antoka. Ny olona manana fandaminana vaovao sy ny hatsaran'ny mpitarika dia voafidy. Ny olona manana vato be indrindra no mandresy ny toeran'ny minisitra. Toy izany koa ny praiminisitra.
Tsy maintsy havaozina ny lalàna ary aseho amin'ny vahoaka amin'ny teny tsotra mazava mba hahazoana fankatoavana na tsy ekena. Ny lalàna dia manome daty lany daty ary azo fidina na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana rehefa tapitra io daty io. Ny lalàna tsara mitoetra. Ny lalàna ratsy iray nanjavona.
Afaka manangana demokrasia mivantana ianao raha mbola eo ny fitondrana ankehitriny. Izy io dia endrika manohitra fanoherana izay mety ho lasa mivaingana avy hatrany. Revolisiona mangina sy haingana. Tsy miandry fifidianana ianao, fa alamino mivantana amin'ny fifidianana an-tserasera.
Mety ho lasa mivaingana avy hatrany izany, satria mitazona ny rafitra ara-tsosialy efa misy ianao, fa manolo ireo mpitarika amin'ny alàlan'ny fifidianana amin'ny Internet. Ny papara ny satroboninahitra dia soloin'ny mpitantana avy amin'ny vahoaka.
Rafitra fandatsaham-bato izay manome filaminana ary afaka mifehy ny fifidianana kandidà misy. Mety raha tsy izany dia amin'ny alàlan'ny blockchain na amin'ny alàlan'ny rohy mankany amin'ny DigiD anao, saingy satria tsy tokony hanantena ny hiara-miasa hiasa isika, dia afaka mandamina izany isika. Ny FVVD dia efa manome ny sehatra ho an'io (www.fvvd.nl).
Ny taratasy etsy ambany dia manazava azy an-tsipiriany ary taratasy rojo vy iray ahafahanao mandefa mivantana amin'ireo namanao na olom-pantatrao:
Fohifohy momba ny governemanta ankehitriny sy ny «fanakatonana manan-tsaina» izay noresahanay.
Tsikelikely, eto amin'ny faritaniko, mihamaro hatrany ny olona manomboka mahita fa te hanova ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny ny governemanta. Io “fanidiana mihira” io dia hiova tsikelikely ho lasa maharitra mandrakizay, izay tsy maintsy ividiananao ny fahafahanao. Ny normal vaovao dia nanjary metatra sy tapaky ny fiaraha-monina ary ianao tsy maintsy mandoa izany amin'ny tenanao. Fihinana amin'izany aho.
Henoy, afaka manakarana mpanolo-tsaina lafo vidy ankehitriny ireo orinasa vao mahazo toro-hevitra momba ny fametrahana ny orinasan'izy ireo amin'ny tongotra enina tongotra. Mijanona ianao fa misy marika vidiny mifamatotra amin'izany; tapakila iray ho an'ny orinasa (satria mety hahazo fahazoan-dàlana ofisialy ho an'ny fepetra mirefy 1,5 metatra) ary tapakila iray ho an'ny mpanjifa (satria ny olona iray dia mila mikohaka izany adiny iray sy sasany metatra izany ary ny fihenan'ny vola miditra).
Azo inoana fa noho ny vaksiny covid-19 hoavy dia ho voatery tsy maintsy hatao. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Inona no hevitrao ... Ankoatra ny fanontaniana raha efa voasedra tsara tokoa ny vaksiny toy izany, ary mitovy ihany amin'ny fanontaniana raha maniry ny fitaovana iray sy sasany metatra ho an'ny fiarahamonina isika na tsia. Mieritreritra aho fa marina i Rutte ary tena tsy mihaino ny fihetsiketsehana ao The Hague izy ireo.
Tsy haiko izay hevitrao momba izany, fa ny teknôlôjia angamba mety zatra hanara-maso ireo fepetra rehetra ireo. Izany teknôlôjia sy angon-drakitra lehibe izany dia ho tonga, satria be loatra ny orinasa afaka mahazo tombony mahaliana indray. Sa hafa no hitanao? Mino aho fa be loatra ny olona efa miasa ho an'ny orinasa lehibe izay manome vahaolana amin'ny ICT na ho an'ny masoivoho governemanta izay miantoka fa afaka manohy mandoa vola amin'ny tranony izy ireo ary hitazomana ny fianakaviany. Ireo olona ireo dia mety hahita fa misy zavatra tsy mety, fa rehefa tsy maintsy misafidy izy dia ny ankamaroan'ny olona no misafidy ny tranony sy ny zaridainany.
Ianao sy ianao dia tena mahalala hoe manao ahoana ny fiaraha-monina vaovao. Ny haino aman-jery sy fanjakana dia manohy mino fa ilaina ny fivarotana ary ny fomba ampidirana azy dia mandeha amin'ny dingana tsirairay, hany ka manohy ny finoana ny vahoaka fa tena ilaina tokoa ny mitahiry ny viriosy corona. Tsy mahasambatra ahy izany.
Ianao ve no nilaza an'izany? Ny fizotran'izany dia hitohy amin'ny onjam-peo avy amin'ny 'fanamafisana ny fehin-kibo' ka 'avelao ny lohataona mitsimoka' ary avy eo ny onja manaraka. Taorian'ny vanim-potoana iray efa zatra iray metatra sy sasany ary toerana kely kokoa ho an'ny maneuver, ny haino aman-jery, ny haino aman-jery, ny manam-pahaizana (famokarana tarehimarika an'ny RIVM) ary ny mpanao politika dia hampiseho antsika ny fifohazana amin'ny virijin'ny corona, aorian'izay ny fampidirana ny ampahan'ny tapany manaraka fonosin'ireo vahoaka ny fonosana.
Eny, tsy tadidiko raha niteny an'izany ianao, fa mihamaro hatrany ny olona mahita vaovao mikasika ny fomba filalaovana antsika (ankoatra ny vaovao sandoka rehetra). Afaka mahita betsaka momba ny fisian'ny vaksiny mampidi-doza izahay, ny fomba fangatahan'ny Microsoft patent iray hanome antsika taratasy fanamarinana vaksiny nomerika, ny fomba hanomezan'i Bill Gates ny sehatry ny haino aman-jery sy ny vaksiny, ny fomba azon'ny fampiharana ampiasaina hanaraha-maso anay. Heveriko fa voataona haingana ho an'ny rafitra fanaraha-maso nomerika tanteraka isika. Heveriko fa tena zava-dehibe ny fampahalalana, satria raha tsy fantatrao izay loza mihatra aminao, dia tsy mitsambikina ara-potoana ianao. Na izany aza, tsy maintsy misy dingana manaraka. Mila miatrika vahaolana isika.
Mihevitra aho fa raha tsy manao na inona na inona ianao sy ianao, dia hifindra amin'ny fiarahamonina izay tsy misy vola intsony, fiarahamonina izay misy ny fampiharana, cameras ary data lehibe no mahalala ny toerana misy antsika na raha manana hafanana mety isika (tsy misy covid-19) ary iza no hifaneraserantsika rehetra. Ny dingana manaraka dia ny mampifandray ireo data rehetra ity amin'ny rafitra isa. Tsy miandry aho ve aho? Miaraka na tsy manana isa ampy, mety ianao na tsy mandeha ivelan'ny lamasinina na amin'ny fiaramanidina na ny toy izany. Ho tranona maditra izany! Mahafinaritra ny fifandraisan'ny tahiry rehetra amin'ny marika dizitaly mety azo ary ny rohy mankany amin'ny fifandanjan'ny banky digital. Karazana gadra misokatra.
Mihevitra aho fa voataona ho lasa tranonkala iray isika, ary i Shina dia manome ohatra amin'ny fomba hanerena ny olona hanaraka azy. Tsy te-honina any Chine aho. I Shina koa dia mampiseho ny fomba najanona ananan'ny olona manohitra ny fanoherana fotsiny. Izany no fiantraikany mandeha ho azy toy izany. Sa hafa no hitanao? Amin'ny farany, ny vahoaka dia hiondrika any indray, amin'ny ampahany satria maro amin'ny fiaraha-monina ihany no miasa ho an'ny ampahany amin'ny 'rafitra'. Raha manana asa ao IT ianao ary mamatsy rindrambaiko database na mamatsy rafitra sy fakan-tsary, raha miasa amin'ny mpanao famotorana ianao na amin'ny maha polisy azy, dia mbola misafidy ihany ny fidiram-bolanao. Izany no lalana nalehany.
Vao haingana ny olona dia nilaza hoe: "Avy eo dia arotsako ny findaiko mba hialako amin'ny rafitra". Fa handeha amin'ny fotoana iray izay tsy azo tanterahina ny fandraisana anjara amin'ny fiaraha-monina tsy misy digiD na tsy misy eHerkenning (ho an'ny orinasa). Efa izay no raharaha. Toy izany koa no hitranga amin'ny teknolojia corona vaovao. Raha nanary ny findainao ianao dia tsy afaka miditra amin'ny tsena lehibe intsony. Avy eo ianao dia spool irery.
Mieritreritra ve ianao fa ho tonga amin'izany? Mihevitra aho fa ... Ary dia afaka ny ho tafavoaka velona ianao raha toa ka manana zaridaina manokana ianao, fa avy eo tsy maintsy mahazo ny voa avy aminao koa ianao, satria ny fahonon-tena dia mety ho voarara ihany koa mandritra ny fotoana maharitra. Eny, tsy fantatro ny momba anao, fa tsy manana fotoana ho an'izany aho ary tsy mahatsapa an'izany.
Heveriko fa ny dingana manaraka dia ny hoe tsy tokony ho any amin'ny faritra be olona intsony ianao raha tsy nanao vaksiny. Ary io “angon-drakitra lehibe” io dia mety handray anjara amin'izany ihany koa. Raha toa ka misy fampiharana toy izany taty aoriana fa efa nahazo vaksiny ianao, dia hidiranao ny vavahady fidirana amin'ny tranombarotra; raha tsy izany dia tsia. Amin'ny dingana farany, ny fampiharana toy izany dia mety hisolo ny toetoetra nomerika mifandray amin'ny vatanao na ny zavatra iray. Tsy haiko, henonao fa miasa amin'i Microsoft miaraka amina patanty na zavatra i Microsoft (tsy tsikombakomba, novakiako tao amin'ny tranokalan'ny Google patanty). Ary ho feno fotsiny izany raha mampifandray ireo fifandanjan'ny bankinao amin'ireo rehetra ireo izy ireo. Brrrr .. Tsy ho afa-mandositra mihitsy raha tsy hoe misafidy ny hiaina 'any anaty', fa veloma ..
Afaka mihoby izay tiantsika isika; afaka mikiakiaka isika fa tsy mila izany rehetra izany fa toa ny hiaka any an-efitra. Ny ankamaroany dia miankina amin'ny 'ny rafitra'. Mieritreritra aho fa fotoana izao hieritreretana izao: Raha tsy azonao atao ny mandresy azy, midira.
Mino aho fa tsy maintsy arahana vahaolana mivaingana izay ahafahan'ireo miasa ho an'ny 'rafitra'. Tsy maintsy aroso amin'ny vahaolana mivaingana sy azo tanterahina isika mba hiantohana ny tsy hamoizana fahatokisana ny olona fa misy ny zavatra lazainy. Miantehitra tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra apetraka etsy ambony isika izao. Ny rafitra politika ankehitriny dia manery antsika hanaiky ireo fanapahan-kevitra tsy misy fandraisana anjara. Mieritreritra aho fa azo atao amin'ny fomba hafa. Tena mila miova izao. Tena mahafaty ahy mihitsy.
Mamaky momba ny fotoana iray aho hamadika ny zavatra miaraka amin'ny teknolojia mitovy amin'izao fotoana izao, raha tsy izany dia mamadika ny fiaraha-monina iray manontolo. Tsy mitaky fitroarana na revolisiona malaza be loatra. Ny olon-drehetra dia afaka manohy ny ataony ihany. Tiako ho fantatrao izay hevitrao momba izany satria mankasitraka ny hevitrao aho.
Ny hany zavatra miova dia ny firafitry ny fanapahan-kevitra. Ireo minisitra sy mpiasam-panjakana izay mitatitra ny satroboninahitra ankehitriny ary manery lalàna tsy misy ny faneken'ny vahoaka avy hatrany dia tokony hitatitra amin'ny vahoaka. Ny minisitra dia tokony hosoloina solontenan'ny vahoaka voafidy mivantana (izay tena misolo tena ny vahoaka fa tsy satro-boninahitra). Antsoin'izy ireo hoe demokrasia mivantana izany. Izany dia navoakan'i Elon Musk (amin'ireo fiara Tesla ireo). Tsy zazalahy tsy adala izany…
Raha azo atao izany amin'ny alàlan'ny demokrasia mivantana ary raha ampahafantarina haingana, dia heveriko fa tokony manomboka manao izany isika ary hampiroborobo azy. Amin'izany demokrasia mivantana izany dia mifidy ny solontenan'ny vahoaka amin'ny Internet ny vahoaka. Noho izany dia afaka ny ho tonga mpifaninana ianao na hifaninana amin'ny kandidà ary ny rafi-pifidianana no miantoka ny fifidianana sy ny fitomboana ho fanohanana. Tahaka ny rafitra mifidy toa an'i Holland's Got Talent ary fandaharana amin'ny fahitalavitra hafa. Ny teknôlôjia. Ny azoko dia hoe vita avy hatrany izy io.
Ka ny solontena voafidy mivantana dia tokony hanatsotra ireo lalàna sy hanolotra izany amin'ny vahoaka ho fankatoavana na famerenana. Avy amin'ny lalàna an'arivony, hatramin'ny mazava, hatramin'ny habeny ka hatramin'ny kalitao. Handray anjara mivantana amin'ny vahoaka. Mieritreritra aho fa tena mahay izany.
Afaka miandry isika mandra-pahafahan'ny lalàna momba ny vaksiny voafidy mba hisafidy ny hanao vaksiny na mankany amin'ny fonjan'ny dizitaly na azontsika atao ny misambotra. Heveriko fa mila manararaotra an'ity krizy ity isika mba hahatontosa ny fiovana. Ovaho ny fomba itadiavantsika azy! Ny demokrasia mivantana dia afaka misolo ny rafi-pahefana misy amin'ny alàlan'ny rafitra mifidy an-tserasera ao anatin'ny volana vitsivitsy. Eny: Farany misy zavatra mivaingana fa tsy ireo hevitra volon'ondry rehetra ireo amin'ny Internet.
Tena te hahafantatra aho ny hevitrao momba izany! Mihevitra aho fa izao no fotoana hamoronana fanampiana ho an'ity. Andeha isika hiresaka momba izany manokana. Azontsika atao ny manangana azy io satria namboarintsika lehibe ny Facebook. Manao izany fotsiny ianao amin'ny fizarana ... manondro ireo olona manodidina anao. Izany no antony niheverako fa hifandray aminao aho.
Jereo ity eto, hazavaina tsara ao: https://www.fvvd.nl/ ary azonao atao ny manasonia fanangonan-tsonia iray avy hatrany izay mampiseho fa tena maniry ny hanao an'izany isika. Tokony hiely fotsiny izany raha manontany ahy ianao.
Eny, afaka mandre izany avy aminao aho.
(PS angamba hevitra: alefaso any amin'ny namantsika hafa ity mailaka ity)
Betsaka ny fanontaniana momba ny fomba fiasan'ny rafitra politika tahaka izany, fa ny hatsikana kosa dia:
fa azo ampiharina haingana
fa izy no endrika tsara indrindra amin'ny demokrasia
fa afaka manamboatra ny rafi-bola indray ianao
Ity farany dia azo atao, ohatra, amin'ny fampidirana mpanao nomerika nomerika (ary mety ho taratasy). Io guilder io dia rakotry ny fenitra iray ny sandam-bola ankehitriny handresena. Io rohy io dia mamorona ny "fenitra volamena" vaovao. Mety ho volamena ara-batana izany na mety ho bitcoin izany. Azonao atao ny mamorona vola haingana amin'ny alàlan'ny vola nomerika ary ny fifandraisana miaraka amin'ny bitcoin (satria "fenitra volamena") dia haorina haingana. Ity manaraka ity dia mihatra amin'ny zavatra rehetra: misafidy ny vahoaka.
Ny maro an'isa no mamaritra! Ary izany no hatsaran'ny demokrasia mivantana. Ny demokrasia mivantana dia tsy ho vita na oviana na oviana izany satria mila fotoana be dia be. Miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny, afaka manome zavatra haingana ny olona ianao. Amin'ny alàlan'ny fampiharana iray sy ny tsindry bokotra iray, mifidy kandida ianao ary amin'ny tsindry bokotra iray ekena na nolavinao ireo tolo-kevitra.
"Eny, saingy tsy azo atao izany, sarotra be loatra ny lalàna noho izany ary be dia be loatra ny lalàna noho izany!Tena marina ary izany no tokony ovaina. Ny mpitondra vaovao dia tokony hahay hanamora, mifandray mazava ary handresy lahatra ny vahoaka. Ny ankamaroany dia tapa-kevitra foana.
Avelao hilentika ao, eritrereto tsara, fa aza ela loatra. Mila miala haingana amin'ny zava-misy iainana isika izao ary mila maka haingana ny olona manjaka antsika izao ivelan'ny trano. Hamaky bebe kokoa amin'ny www.fvvd.nl ary apetraho eo ambanin'ny 'fanontaniana & valiny ny fanontanianao.
".. Ary raha mihena ity ianao dia ho avy ny zanakao"
loharano loharano: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Mamatotra an-taonina maro ny fatorana amin'ny raharaham-panjakana, Jordie Zwarts, saingy tsy mahavita na inona na inona
Tags: mihetsika, demokrasia, mivantana, mivantana, Featured, Forum, fvvd. fety, lockdown, orinasa, mpanao fanompoam-pivavahana, -tserasera, sehatra, revolisiona, fifidianana
15 May 2020 amin'ny 15: 27
ANP: Fifidianana: Mitombo amin'ny seza 43 ny VVD amin'ny alàlan'ny corona fomba
Ny mpifidy dia mankasitraka ny fomban'ny corona an'ny governemanta, izay manome indrindra ny antoko ankolafy, VVD, araka ny fanadihadiana farany nataon'ny I&O Research. Ny antoko liberaly dia afaka miankina amin'ny seza virtoaly 43, raha toa kosa ny antoko hafa rehetra mijaly amin'ny seza 16.
15 May 2020 amin'ny 15: 29
ANP John de Mol… fandatsaham-bato na fampielezan-kevitra azo itokisana? Mandritra ny fotoana rehetra hanaporofoana ny mifanohitra.
15 May 2020 amin'ny 15: 42
ny rafi-pifidianana iray manontolo dia tsy azo atokisana rehefa miteny izy ireo fa seza 43 dia mieritreritra fotsiny fa afaka mahazo ny laharana 43 izy ireo. Ny ankamaroan'ny mponina ao Madurodam dia mbola mino ny fizotry ny fifidianana sy ny vata fandatsaham-bato.
Eny, afaka milaza aminao aho amin'ny loharano azo itokisana fa feno hosoka ny boaty ary tsy tsara noho ny repoblika akondro mahazatra izy io. ANP koa tafiditra an-tsofina amin'ny fanisana ireo latsabato
"Ny kaominina dia mizotra amin'ny isa haingana amin'ny ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Miorina amin'ireo fitambaran'ny fifidianana ireo, ny NOS dia haneho ny voka-pifidianana amin'ny harivan'ny andro fifidianana. ”
“Ny tompon'andraiki-tanana dia manampy ny valin'ny birao fandatsaham-bato. Natao izany noho ny tatitra ofisialy momba ny birao fandatsaham-bato. Ny valiny dia mitambatra noho ny fanampian'ny fitaovana fanaovana kajy (Fifidianana Software Support ankamaroan'ny), na amin'ny fety na amin'ny sehatra kandidà. ”
15 May 2020 amin'ny 15: 55
Joseph Stalin - 'Ireo izay nifidy dia tsy manapa-kevitra. Ireo izay manisa ny vato no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra. '
15 May 2020 amin'ny 16: 07
Heveriko fa mbola namana ihany ny Mol na farafaharatsiny mpiara-miasa amin'ny Berlusconi. Ny vanimpotoana eo anelanelan'izy ireo, dia manangana hoavy mamirapiratra ho an'ny tenany sy ny rahalahiny, fa tsy ho an'ny zanak'olombelona.
16 May 2020 amin'ny 09: 10
idd it benne kabbalists, Berlusconi dia fantatra fa mpikambana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny malaza PII. Io trano fandraisam-bahiny io izay voarohirohy amin'ny famolavolana ny hetsika Gladio any Italia izay nahafatesana olona am-polony teo ambany fiadian'ny «Brigade Red». Fantatr'izy ireo foana ny fomba hividianana araka ny tokony ho izy ary amidiny ireo olona mampiahiahy mahazatra.
16 May 2020 amin'ny 13: 51
Freemasonry Nanala ny fiaraha-monina tandrefana
Betsaka ny mpanapa-kevitra tandrefana, mpanao politika, mpahay toekarena, ary manamboninahitra miaramila no mpikambana ao amin'ny fiarahamonina miafina na voataona ary matetika fehezin'ny mpikambana toa izany… Ity no rafitra satanisista manerantany iray izay hitantsika ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sasany any Freemasonry, toy ny PII Ny trano fandraisam-bahiny tafiditra ao amin'ny Calvi Affair any Italia tamin'ny fiandohan'ny taona fitopolo - ny tsiambaratelo, ny duplity, ny fampiasana hery mitarika, ny fihoaram-pefy, ny kolikoly ataon'ny manampahefana ary, raha ilaina dia toa ny famonoana olona mihitsy aza.
22 May 2020 amin'ny 14: 43
Fifidianana ?! Ajanony fotsiny, azon'i Trollongren indray ny tsirony
Kabinetra (vd Koning): ny fampihemorana ny fifidianana noho ny coronavirus dia tsy azo fehezina
"Ny fifidianana amin'ny alàlan'ny taratasy dia" tsy eken'ny sainy ihany koa ', hoy i Ollongren. " hahahaha
Vakio izany, mamaky ny tatitra nataon'ny Fitsarana momba ny trano tsy misy entona voajanahary, izay nataon'i Trollongren. Mety handoa vola izany… ampy ny volan'ny hetra Madurodam
Amin'ny endriny ankehitriny, ny fandaharana voajanahary maimaim-poana ho an'ny entona voajanahary dia tsy mandray anjara amin'ny tanjon'ny Minisitry ny Atitany sy ny Fifandraisan'ny Fanjakana (BZK) amin'ny alàlan'ny fizaram-bary tsy misy alikaola. Nampanantena ny minisitry ny atitany sy ny fifandraisana amin'ny Fanjakana fa tsy azo tanterahina.
22 May 2020 amin'ny 17: 16
lazao amiko .. dia mandeha fotsiny ihany. Afa-tsy ny entona, tsy izany ve ny entona mampihomehy?
Ny minisitra Ollongren dia manadihady boaty voafantina iray sy sasany
Ny valan’aretina COVID-19 dia tsy antony tsy ahafahana mikarakara na manemotra ny fifidianana parlemantera 2021, fa mety hiteraka ny tarehim-pifidianana hafa koa. Ny minisitra Kajsa Ollongren ao amin'ny atitany dia nanoratra tao amin'ny taratasy ho an'ny parlemanta tamin'ny zoma izao fa izy no manao famotopotorana momba an'io. Tsy mihatra amin'ny fifidianana ho an'ny lapan'ny solontena ihany izany fa amin'ny fifidianana ho an'ny filankevitry ny nosy St. Eustatius ary boaty fandatsaham-bato vitsivitsy izay hotontosaina amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020.
Ny minisiteran'ny atitany dia hanao scenario amin'izay ho jerena ny fifidianana raha mila ahitsy ny boaty fandatsaham-bato. Ity dia mety ho ohatra ho famolavolana indray ny biraom-pifidianana. Ny minisitra Ollongren dia nanonona ihany koa ny mety hisian'ny fifidianana amin'ny taratasy raha toa ka tsy misy fomba hafa. Manampy azy koa izy fa ny tsiambaratelo sy ny fahalalahana mifidy dia tsy harovana ary koa amin'ny fifidianana mahazatra.
15 May 2020 amin'ny 19: 08
Raha te ho mpitarika mpitarika vondrona lehibe ianao dia manao izany tsy misy zana-bola fa tsy vola (nomerika). Raha vao manodidina ny vola dia mandeha ny zavatra tsy mandeha. Ny praiminisitra ankehitriny dia mody tsy mitady vola fa amin'ny varavarana aoriana dia tantara hafa tanteraka izany.
Ny fanomezana vola maimaim-poana ny olona dia tsy hanampy, ny vola no manome angovo mandany ny fotoana. Amin'ny maha mpanara-dia tanora azy dia hiantsoantso bebe kokoa izy ireo.
Ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao dia mitombo maimaimpoana ary ny lalàn'ny natiora dia mitovy ho an'ny rehetra. Ny ankamaroan'ny zanak'olombelona sy ny mpitarika azy dia nanolo ireo lalàna ireo amin'ny lalàna ego.
Ny olon-drehetra eto amin'ity tontolo ity dia manan-jo hanana sy mamboly tanety. Hisy ny sakafo be dia be loatra ka tsy hisy noana.
Tsy mila alaina ny ala mba hitomboana ara-toekarena. Raha te handeha any an-kafa ianao dia manao fifanarahana ifanakalozana mandritra ny fotoana kelikely. Mafy ny fitomboana ara-toekarena, fitiavan-karena ny fitiavan-tena.
Ny mahaliana ny rehetra dia mitohy hatrany izany satria fantatsika izay hitranga raha toa ka ialantsika izany.
O shit ity dia efa nitranga talohan'ny 😉
15 May 2020 amin'ny 20: 10
Mihevitra aho fa hevitra mamirapiratra izy ity. Azafady tohizo amin'ny fo manontolo.
Manana fanontaniana roa:
Azonao atao ve ny mampihatra io rafitra io ho an'ny demokrasia mivantana amin'ny alàlan'ny fitsapankevi-bahoaka?
Ary ahoana no azonao antoka fa azo itokisana io rafi-pampianarana io fa tsy vita hosoka?
Tsy mankasitraka ny vola nomerika na koa ny fanodinana ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny aho.
Azo ampiharina amin'ny fomba "analogical" bebe kokoa ve ity rafitra ity?
16 May 2020 amin'ny 21: 57
Ny fandinihana tsara sy sarobidy rehetra ao amin'ny fanehoan-kevitra. Na izany aza, misy fihetseham-po na ilay taratasy toy ny voasoratra ato amin'ity lahatsoratra ity ary misy ny taratasy efa natsipy sy nampitaina tamin'ny hafa? Raha manana soso-kevitra hafa ianao na momba ny taratasy na manatratra ilay tarika kendrena, dia aza misalasala mizara izany. Ity dia hetsika kely ary raha miely haingana ny tsimokaretina dia afaka miparitaka amin'ny endriny koa ity hafatra ity. Betsaka ny valin-kafatra amin'ny hafa (tranokala oposialy) no mampiseho fa mahatsapa ny fihenan'ny tsinain'ny maro. Ankehitriny izao dia fotoana izao no hakana ity tarika ity amin'ny fantsona hafa. Iray fomba iray ny fandikana ny taratasy sy ny fizarana azy amin ny fanontaniana mba hizaranao azy bebe kokoa. Torak'izany koa, ny "gazety hafa" dia nozaraina tamin'ny Andro Fanavotana, izay fandefasana ihany koa. Antenaiko am-pahatsorana fa ireo olona 930 nanao sonia ny fitakiana dia nandika izany taratasy izany sy nizara izany tamin'ny hafa.
16 May 2020 amin'ny 23: 06
Ekena izao, izao no fotoana tokony handraisana andraikitra sy hampiroboroboana azy io. Tsy miala amin'ny lahatsoratra fotsiny izahay, fa amin'ny famporisihana olona tokoa.
16 May 2020 amin'ny 22: 11
Apetraho eto fotsiny, mipetraka miaraka amin'ny vokatry ny chimeric anao ianao, saingy efa mahalala izany ianao. Jereo eto ambany.
Fanampin'izay, Gilamina dia zavatra naparitaka avy amin'ny teny hebreo. Toa izay no dikany manaraka.
Gileada (mpamorona ny remdivivir, ny vaksiny dia tadiavin'i Trump ny 300 tapitrisa amin'ny vaksiny hoentin'ny miaramila. Koa noho izany ianao dia ao anaty tadidy, satria tsy nisy nosedraina ny zavatra rehetra, ary azo antoka fa tsy namboarina miaraka amin'ny finiavana tsara indrindra. Jereo ny anaran'ny orinasa. ary manondro eto ambany io.
Fampandrenesana ny mpitsara iray dia anarana mitovy amin'ny Galeed amin'ny teny hebreo. Samy manamarika ny toerana nifangaro teo amin'i Jakoba sy Labana. Gen 31:47 (tsy hanoro hevitra ny olona ny Baiboly fa ny hanazava)
Papa Francis Encyclical Laudato Si (taratasy fampianarana) Miantso ny famonoana olona 6 miliara;
Ny induvidual dia voahaingo amin'ny fanatrehana tsikombakomba iray izay mahavariana fa tsy afaka ny hino izy io. Sodoma, Phedophile, Freemason 33 degre. J Edgar Hoover, talen'ny FBI.
Inona ny firaisana tsikombakomba?
Misy fiovana izay tadiaviny hitondra anao, fa tsy hanambady.
Ka mora tokoa ny mahita hoe ratsy ny an'ireo olona ireo, raha afaka miantso azy ireo ianao.
18 May 2020 amin'ny 22: 57
Tahaka ny navoakan'i "De Andere Kranr" dia toy ny kopia vita pirinty any Holandy, dia nisy gazety ihany koa navoaka tany Alemaina izay ahafahan'ny mpanohitra iray mamaky momba ireo fepetra ankehitriny.
Ny fanaparitahana ireo karazana vaovaom-baovao ity dia azo antoka fa hanampy olona maro kokoa hisedra tsindry tanora kokoa rehefa mahita ny fahatsapana ny havokaviny mihamafy kokoa noho ny noheveriny tamin'ny voalohany. Mazava ho azy fa mety ho fantsona hisambotra ity vondron'olona ity koa izany, fa misy zavamananaina misy eo amin'ny vondron'olona mitombo. Izany no antony tokony hampiroboroboana ny hetsika demokrasia mivantana eo amin'ny vondron'olona lehibe kokoa. Mitaky ireo rehetra mamaky ity handika ny taratasy izany ary hanolotra izany, ohatra, ny adiresy 10 ao amin'ny faribolana voalohany misy anao amin'ny fanontaniana raha maniry ny hampita izany taratasy izany ihany koa izy ireo. Rehefa mitranga izany dia lasa fitomboana fampiroboroboana ny fahafantarana ny fiovana / safidy toy ny demokrasia mivantana. Ny fahafantarana azy dia ny dingana voalohany mankany amin'ny fihetsiky ny olona, ​​araka ny hanamafisan'ny mpandeha maro.
Aza hadino fa ny faniriana hiverina amin'ny fomba mahazatra dia tsy tokony hitranga intsony satria ity rafitra ity dia nanome fahafahana ny fahaiza-mitantana ny fiarahamonina ho amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny. Ka ataovy azafady ao an-tsainao ity eritreritra ity. Ny safidy dia ny hanaiky ny ara-dalàna vaovao izay ahafahantsika mihaona sy mamaky amin'ny telefaona na mandray vahaolana hafa ary ho lasa mpandihy 5, 15, 500, 50000 na 1 tapitrisa ny "famoronana hetsika".
Manaova hetsika kely ankehitriny ary jereo hoe firy ny olona azonao tratrarina. Ataovy izany ho an'ny zandry tanora sy ny ho avy sy zafikeliny !!! Noho izany: https://www.fvvd.nl
20 May 2020 amin'ny 14: 50
ff ho mazava
Iza no nanao sonia ireo lalàna sy didim-panjakana?
Ny tolo-kevitry ny lalàna neken'ny Parlemanta sy ny Didy Royal dia niara-nanao sonia (nifanarahana) avy amin'ny Mpanjaka ary avy eo nataon'ny minisitra tompon'andraikitra na sekretera an'ny fanjakana. Avy eo dia ahomby izy ireo. Ny marika contra dia mampiseho fa tsy Mpanjaka io fa ny minisitra izay (mpanao politika no tompon'andraikitra)
Nahavita an'izany indray i Willy tog…
20 May 2020 amin'ny 18: 54
Ny tena izy ireo dia tena nahay nampiditra ny lalàm-panorenana, araka ny torohevitr'ireo lehilahy mitovy aminy.
Samy mila sy miara-miasa izy ireo, fa ny olon-tsotra kosa tsy lazaina an'izany. mifamatotra tsara izy ireo.
Aiza na aiza na aiza ny iray. Mbola tsara toa ny mpanjaka tsy mandoa hetra, fankasitrahana renivohitra sy fahefana, ary koa ny anjara asanao. Tsy ilaina ny mampihatra mba tsy hisy hirotsaka hofidina ny kandidà tsara kokoa. Avy eo dia nanentana ihany koa hanapa-kevitra hanapa-kevitra hanendrena izay nanendrena azy ho mpisolo toerana azy ireo. iza no mifehy ny mpanjaka ao anatin'ny toe-javatra tahaka izany? Izany no antony be dia be ny mpankafy oranye. Tsara izany dia mandoa mpankafy volomboasary. Orange dia antoko politika izay nataon'izy ireo mazava tsara ihany koa mba tsy hanavakavahan'ny mpanjaka. Na iza io ?? . Rafitra Feudal tamin'ny taonjato faha-21 Manala izany. Saino ny sonia izao fangatahana izao!
Fandrahonana baomba nanoratra hoe:
20 May 2020 amin'ny 21: 05
Eny tokoa, fomba haingana hanelanelana io - raha hita ny mpanohana ampy. Ary mieritreritra aho fa mila mihoatra noho ny tanjon'ny fangatahana.
Ny tena izy dia ity ihany no mifototra amin'ny fisehon'ny fiaraha-miasa. Na ahoana na ahoana, demokrasia foana no manenjika ny vitsy an'isa tsy mahazo ny "lalany". Ankoatr'izay dia mampidi-doza ihany koa ny demokrasia mivantana raha tsy amin'ny lafiny atsy avaratra ny media. Ary ny farany dia tsy resaka mivantana any Holandy.
Ny ohatra iray momba ny fomba tsy mety dia hita ao amin'ilay andian-dahatsoratra "The Orville" vanim-potoana 1. 7. Satria ilay andian-dahatsoratra "stream" dia tsy midika fa tsy afaka mitondra hafatra mahasoa izany ...
Izaho ihany koa tsy miahiahy fa hiara-miasa ihany ny milina herinaratra raha ampy ny vato, fa tsara. Tsy diso ny fitifirana fa diso. Na izany aza, toa hafahafa ny manao sonia fitakiana. Mbola ny fahatsapana fa ekena fa manana fahefana aminao ny olona ary tsy afaka manao na inona na inona raha tsy misy azy ireo. Raha miaiky izany ianao, maninona ny olona no mamaly ny fangatahana nataonao… ..
20 May 2020 amin'ny 22: 26
Ny fangatahana dia tsy mihoatra ny fanadihadihana hoe firy ny olona vonona ny hanomboka ary hampiseho ny fanekena manokana. Mazava ho azy fa naseho an'i neiamdn avy amin'ny politika ankehitriny, fa miaraka amin'ny sonia ampy izany dia mariky ny: "Ary miala izahay izao" amin'ny filaharana politika ankehitriny.
Ny zavatra voalohany tokony hatao, mazava ho azy, dia famerenana mafy dia mafy ny zavatra ao anaty fantsona. Mahatsikaiky izany satria maka ny fiankinan-doha amin'ny olona iray ianao, saingy izao na tsy izany ary ho hitantsika hoe firy ny olona vonona ny hidina any ambany indrindra ho amin'ny fiovana.
Azonao atao ny misakana azy tsy hanao fahadisoana. Ohatra: ny fanaovana vaksiny takiana. Andeha atao hoe ny ankamaroany dia maniry ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao satria ny fitaoman'ny haino aman-jery ary efa nino izy fa tsara izany. Manohitra ny lalàm-panorenana ity lalàna ity. Ny lalàm-panorenana dia misy fitsipika fototra mifototra amin'ny fahafahana sy ny fanapaha-tena. Noho izany dia tsy tokony (izay mitranga amin'ny lalàna ankehitriny) no mametraka lalàna manelingelina na manandrana mandia ny lalàm-panorenana (miorina amin'ny zon'ny olombelona fototra).
20 May 2020 amin'ny 22: 44
Ho an'ireo izay mamaky ary tena maniry fanovana ho an'ny zanatsika sy ny zanany. Mety efa nanao sonia ny fanangonan-tsonia ianao, saingy tsy midika akory izany fa fanovana. Vonona ny hanao zavatra ve ianao fa tsy mizara lahatsoratra sy horonan-tsary izay mampiavaka na mihoatra ny fanamafisana izay efa fantatra. Azo atao ve ny manome ny "hetsika" zavatra hafa, ohatra, ny fametrahana sary mihetsika izay ahafahan'izy ireo horesahina avy hatrany ary aiza, ohatra, dia mizara andraikitra isika mba hanao zavatra izay mahatonga ny tena fiovana. Na misy torohevitra hafa ahazoana tarika mikendry tarika lehibe kokoa. Misy olona be herim-po maro (anisan'izany i Martin) aseho amin'ireo horonan-tsary izay manana fihenan-tsaina hanondroana zavatra. Fotoana tokony itarihana ny tenantsika amin'ireo olona ireo ary handray ny valalotra. Mendrika fanohanana izy ireo ary mila miala amin'ny fiheveran-tena. Ka soso-kevitra ny hanao chat video aho, fa ny z2 manontany:
* izay vonona handray anjara
* misy torohevitra hafa
ho vakantsika izay misy ny fanehoan-kevitra
20 May 2020 amin'ny 23: 03
Antenaiko tokoa fa handray andraikitra ny olona. Mety ho somary tsy dia ilaina loatra ny resaka video, satria tsy maintsy an-tserasera ianao amin'ny fotoana iray, nefa afaka mamorona hetsika amin'ny alàlan'ny mitsangana ny tenanao ianao ary manao fanambarana mazava. Tena afaka manao horonan-tsary ianao ary alefaso eto. Ary mazava ho azy fa tsy mitodika any amin'ny tafika media sosialy an'ny fanjakana isika (antsoina koa hoe 'tafika troll'). Manà hevitra ary indrindra ny asa mivaingana.
Ny fanombohana lehibe dia ny hoe rehefa manomboka mizara ilay tranokala ny olona ary miezaka ny handresy lahatra ny hafa.
21 May 2020 amin'ny 09: 01
Mahagaga fa toa tsy fahavalon'ny vahoaka isika araka ny voatondro ao ambany fitondran'i Stalin.
Izahay dia "vahoaka". Ka tsy tokony ho any amin'ny gulag isika ary aza matahotra azy io, miaraka amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka isika
Ny mihatsaravelatsihy indray dia ny maha-olona tia anao raha tsy te-hanao saron-tava ianao, eo ambany fitarihan'ny fahavalon'ny vahoaka, dia nieritreritra azy ireo ry zareo avy eo tao ambany Stalin ary izao dia izao tontolo izao. Antenaina fa hisy ny hetsika. Ho azon'izy ireo hiatrika azy ireo izy ireo ka atsangano fampahafantarana aloha, fampirantiana ny media sns, fa manana ny vatoko ianao
Ny olona mampahafantatra ny olona dia tsy fahavalon'ny vahoaka, fa “naman'ny vahoaka”, fa tsy araka ny Gulag
21 May 2020 amin'ny 15: 05
Ny sasany amin'ireo mpamaky dia manolotra soso-kevitra hanatratra ny mpihaino bebe kokoa na ohatra ny hetsika izay azo averimberina hanitarana ny mpihaino. Averiko indray, ny fizarana valiny amin'ny Internet dia tsy anjara amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny demokrasia mivantana. Ohatra, niresaka momba ireo tranonkala mitsidika tsy tapaka aho http://www.fvvd.nl Mbola maro kokoa no manao izany? Misy ny mpamaky izay manao hetsika ivelan'ny Internet mba hampiroborobo ny fiheverana ny demaokrasia mivantana sy ilay tranonkala mifandraika amin'izany. Raha izany no izy dia zarao izany ary ny hafa mety hisy handray andraikitra. Hitako fa ny isan'ny olona nanao sonia dia 1181 (misaotra mialoha an'io hetsika io) ary tokony ho avo kokoa matetika izany. Araka ny nanoratako teo aloha dia izao no fotoana satria mihena ny fisandratan'ny mpiara-monina. Manana fihetseham-po ny vavony ny olona ary mitady safidy hafa. Misy mahatadidy ny fehin-tànana nataon'i Lance Armstrong ve? Zoiest koa dia tratra imbetsaka mihoatra ny novinavinaina teo aloha. Mety ho soso-kevitra ihany koa ny mamy, saingy mino aho fa eo amin'ireo olona 1100 izay nanao sonia dia misy hevitra tsara kokoa. Avelao ny hafa handre izany.
bertusjanssen nanoratra hoe:
21 May 2020 amin'ny 15: 06
Fantatrao ve ny zava-nitranga tamin'i al-Qadhafi? Amboary ny volanao manokana ary ireo olona tratra ihany dia olona mitovy saina, handresy lahatra ny olona omena azy ireo amin'ny alàlan'ny fanambarana fa ny trano itoerany no fananany. lasa na dia ary manambara azy ireo fa tsy misy trosa.
« Mamatotra an-taonina maro ny fatorana amin'ny raharaham-panjakana, Jordie Zwarts, saingy tsy mahavita na inona na inona
Ny hazondamosin'i Trump manoloana an'i Shina ve ny fiandohan'ny fahalavoan'ny dolara sy ny fianjeran'ny toekarena? »
Total fitsidihana: 2.514.384